Basinde ngokulambisa kungena imoto KwaPata | News24
Basinde ngokulambisa kungena imoto KwaPata
USINDE ngokulambisa umndeni wakwaZulu endaweni yakwaPata emva kokuba imoto okuthiwa ibigijima ngesivinini esiphezulu iphaphalaze yangena endlini, yabhidliza udonga ngoMgqibelo ekuseni.
Indodana yakulo muzi uMnu Boy Nzimande (48) uthe namanje basamangele ukuthi basinde kanjani njengoba lesi sigameko senzeke bengaphakathi endlini, kukhona nobehleli ngaphandle emnyango.
Uthe yize engayazi imbangela yengozi, usola ukugijima komshayeli njengoba iqale yashaya udonga ngaphambi kokuba iyogaxela esihlahleni.
Elandisa i-Echo uthe: “Lesi sigameko senzeke ekuseni ngesikhathi sizwa ngomsindo singaphakathi endlini. Abazibonele bathi le moto ebiqhamuka ngenhla umshayeli wayo uhlulekile ukuyilawula, yaphaphalaza yashaya udonga.
“Isuke lapho yandiza phezu kophahla yayobhodloza udonga lwaseverandah yaye yayogaxela esihlahleni. Simangele ukuthi umkhulu obehlezi ngaphandle everandah usinde kanjani, njengoba elimale kancane ekhanda emva kokuba amatshe edilikele kuyena.
“Ithe uma isigaxele esihlahleni, kwayima kufika amalunga omphakathi azamile ukukhipha umshayeli obe esephuthunyiswa esibhedlela. Yize kube khona olimele, sibonga ukuthi sisindile sonke ngoba uma ubuka indlela le moto engene ngaye, bekufanele kukhulunywe okunye.”
Uthe yize umonakalo ungabanga mkhulu kakhulu, unina uNkk Khohlwani Zulu usalokhu ethuke njalo njengoba isifo somfutho wegazi (BP) silokhu siphezulu kusukela ngoMgqibelo.
UNzimande uqhube ngokuthi yize kwiyisigameko sokuqala ukuthi kungene imoto kubo, umgwaqo abakhe kuwona uyingozi njengoba isikhathi esiningi izimoto zidlula zidla amagalani kanti futhi azikho nezithibamgwaqo.
Ikhansela lakwa-ward 10 uMnu Msizi Ngcobo uthe uyazi mayelana nale nkinga yalo mgwaqo, futhi okumanje basezinhlelweni zokuthi kufakwe izibiyela mgwaqo (guard rails).
“Njengoba sesingena esabelweni esisha sezimali, kunezinhlelo zokuthi kufakwe izibiyela mgwaqo, ezingezugcina kulo mgwaqo kuphela, kodwa kuzozonke izindawo zakule ward ezinobungozi,” kusho uNgcobo